Iingcebiso zokulungiswa kwemihla ngemihla ngeebhini zokubhukuda
ngu admin nge-20-04-15
Ukugcina ulungelelwaniso olufanayo kunye nombala njenge bikini ehlotyeni elilandelayo, ulondolozo lwemihla ngemihla lubaluleke kakhulu. Oku kulandelayo ziindawo ekufuneka ziqwalaselwe kulondolozo lwemihla ngemihla lwe-bikini. Ukongeza ubomi bebhasikini yakho, unokulandela. 1.Cleaning o ...
Izinga le-10 ephezulu ye-bikini brand
IBikini isebenzisa ubuncinci belaphu kunye nesiciko esincinci ukongeza ubuhle bomzimba wenkcubeko kunye nokuma. IBikini yandisa ubuhle bangaphandle kwempilo yabasetyhini kunye nokuzithemba. Zithini Iimpawu zababhinqileyo ababhinqileyo? Nazi iintlobo ezilishumi zebrasini eziphambili ezikhokelwa nguLa Perla wonke umntu. Hayi.1 ...
UMbukiso weMveliso yeCanton Fair Swimwear
Emva kweminyaka engaphezu kwengama-20 yophuhliso, umChule we-Canton Fair Swimwear wenza ngempumelelo indawo yabahlali, ehlanganisa ndawonye abantu abaziingcali kunye neengcali ezivela kwihlabathi liphela ngonyaka. Khuthaza ishishini phakathi koontanga. Umboniso we Swwingar uxatyiswa kakhulu. Zininzi iimbasa zokubhukuda ngoku, ...